Niteraka Adihevitra tao Egypta ny Fitsidihan’I Sisi tao amin’ny Trano Fotsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2017 4:51 GMT
Vakio amin'ny teny Türkçe, Ελληνικά, srpski, Español, English
Pikantsarin'ny fihaonan'i Sisi sy Trump tao amin'ny Trano Fotsy . Rohin'ny lahatsary.
Tamin'ny Alatsinainy 3 Aprily 2017, nihaona tao amin'ny Trano Fotsy ny Filoha Egyptiana Abdelfattah El Sisi sy ny Filoha Amerikana Donald Trump, fihaonana izay tafiditra ao anatin'ny fitsidihana maharitra enina andro. Nandritra ny fihaonana, nidera ny filoha Egyptiana i Trump tamin'ny ady nataony iadiana amin'ny “fampihorohoroana” tao anatin'ny fotoana niainan'ny Repoblika Arabo ny tahan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mbola tsy nisy toy izany.
Raha ny firehana ara-politikan'ny Egyptiana no jerena dia tsy zavatra kely ny fifandraisan'i Sisi amin'ny Etazonia. Nandritra ny taona maro, ny Amerikana no loharanon'ny famatsiam-bola voalohany nomena ho an'ny miaramila Egyptiana, famatsiam-bola izay hita fa tsy azon'ny mpanao didy jadona ao Egypta dinganina fotsiny, izay efa lehiben'ny tafika ihany koa teo aloha .
Nisioka momba ity fitsidihana manan-tantara ity i Donald Trump :
Voninahitra ny mandray ny Filohan'ny Egypta Al Sisi ao amin'ny @TranoFotsy noho ny fanavaozana ny fiaraha-miasa manan-tantara eo amin'i Etazonia sy i Egypta
Nandray ny fahefana tamin'ny volana May 2014 i Sisi, izay nanongana ny filoha voafidy voalohany tamin-kalalahana tao Egypta, Mohammed Morsi, ary hita niharihary fa nitondra ny sehatra revolisionera Egyptiana niverina indray ho any amin'ny aotra izy.
Raha ny marina, nahitana fihenana ny fanohanan'ny vahoaka an'i Sisi izay nanana taha avo teo aloha. Tapitra tanteraka ny dingana tetezamita demaokratika niroborobo taorian'ny 25 Janoary 2011 mahita ny fampidirana am-ponja, fampanjavonana ankaterena ary ny sesitany mahazo ireo Egyptiana amin'izao fotoana izao .
Araka ny nohazavain'ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona, “Niahy ny tsimatimanotan'ny fanararaotana tanteraka nataon'ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana ary nametra tamin'ny fomba henjana ny zo sivily sy ara-politika” ny filoham-pirenena mpanao jadona ao Egypta.
Niteraka fanehoan-kevitra miha-ratsy hatrany ny politikany rehefa tsy nanome toerana ho an'ny fahalalahana ara-politika i Sisi. Sady nifanehitra tamin'ny tsikera no nifanehitra tamin'ny fanohanana ny fitsidihan'ny filoha ofisialy tany Washington, DC, avy amin'ireo Egyptiana nampiasa ny Twitter tamin'ny alalan'ny tenirohy “Ny Fihaonana An-tampony Egyptiana Amerikana ” amin'ny teny Arabo mba hanehoan'izy ireo hevitra.
Nisioka ny sarin'ilay mpikatroka ny Zon'olombelona malaza Alaa Abdelfattah ny mpikatroka Khaled Sweida, izay nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina tamin'ny volana Febroary 2015:
‘Aty am-ponja aho izao mba hanomezan'ny manampahefana lesona antsika. Aoka isika mba ho lesona noho izany… kanefa miaraka amin'ny finiavantsika manokana ‘
Mifanohitra amin'izany kosa, naneho ny fanohanany an'i Sisi tamin'ny alalan'ilay tenirohy iray ihany i Samy Abu Tera:
Atokisanay io lehilahy io
Hoy kosa ilay mpikambana tao amin'ny parlemanta teo aloha sady mpanohana ny Mpirahalahy Miozolomana, Hatem Azzam, hoe :
Mifankahazo tsara i Trump sy Sisi. Tsy manome antoka ny rariny ny fivahiniana masina tao amin'ny biraon'i Trump. Ny vahoaka no manome ny fanapahana ho an'ny mpanapaka iray. Zava-poana ny fihazakazahana ho any amin'i Trump .
Nisafidy ny hampiasa sariitatra sy sary-sy-soratra, na izany aza, ny Egyptiana hafa , .
Nizara ny sariitatr'i Trump manontany an'i Sisi raha afaka mampianatra azy momba ny paikadiny sasany ny mpisera Twitter Egyptiana iray:
Any Etazonia i Al Sisi mba hanome lesona an'i Trump momba ny hoe “Ahoana ny fomba hamonoana ny vahoakanao” !!
Nizara sary iray avy amin'i ‘Mas Ry’, mampiseho an'i Sisi manoratra taratasim-pitiavana ho an'i Trump ny pejy Facebook malaza , Asa7be Fiarahamonina Manebaka:
Sary mampiseho an'i Sisi manoratra taratasim-pitiavana ho an'i Trump. Sary: ASa7be Fiarahamonina Manebaka
Nizara sary iray mampiseho an'i Sisi sy Trump mandeha eny amin'ny lalantsara ny pejy maneso iray hafa, miaraka amin'ny teny notsongaina izay mivaky hoe: “Rehefa maka anao aloha any am-pianarana ny rainao”. Mivaky toy izao ny fanazavana miaraka aminy: “Trump … ny hanihanin'ny vanim-potoana maoderina.”
Sary nozarain'ny pejy ‘Hat Haga’ . Sary: Facebook.